Nahazo fitaovam-pitsaboana ny tobim-pahasalamana | NewsMada
Nahazo fitaovam-pitsaboana ny tobim-pahasalamana
Ho fisantarana ny fanamarihana ny Andro maneran-tany ho an’ny vehivavy, notoloran’ny vadin’ny filoham-pirenena fitaovam-pitsaboana sy fanafody ny toeram-pitsaboana ao anatin’ny Rezimanta 1 amin’ny faritany miaramila voalohany, omaly teo Analakely. Tsy ny miaramila sy ny vady aman-janany ihany no tonga manatona ao fa ny mponina amin’ny fokontany manodidina an’Analakely rehetra ka manampy ny fitaovana vaovao azo. Maimaimpoana ny fizahana fa ny fanafody no vidiana. 15 isan’andro ny olona mizaha fahasalamana ao amin’ny toeram-pitsaboan’ny Rezimanta 1.
Nohavaozina koa ny toeram-pandraisana hahatsara ny tolotra ho an’ny marary. Anisan’ny fitaovana natolotra ny fitsapana ny tosidra sy ny tahan’ny siramamy, kidoro, fandanjana…
Nanambara ny minisitry ny Fiarovam-pirenena, Rasolofonirina Béni Xavier, fa nanokatra toeram-pitsaboana ho an’ny reny sy ny zaza koa ny miaramila any Antsiranana ka mangataka fitaovana avy amin’ny malala-tanana hapetraka ao amin’ny tobim-pahasalamana izay ho vita amin’ny faran’ny volana avrily.
Nisy ny fanompoam-pivavahana iraisam-pinonana niarahan’ny vadin’ny filoha tamin’ny fianakaviamben’ny vadin’ny zandary sy miaramila, omaly teny amin’ny Chapelle militaire eny Ampahibe, izay natrehin’ny minisitra vehivavy sy ny vadin’ny praiministra.